Huawei Nova 6 SE waxaa ku dhiirrigelin doona iPhone 11 Pro | Androidsis
Waxaan horey u ognahay in 5-ta bisha Diseembar ay tahay taariikhda la qorsheeyay taas oo munaasabaddii daahfurka ee Huawei New 6. Maalintaas waxaan ogaan doonnaa liiska astaamaheeda oo buuxa iyo qeexitaannada, iyo sidoo kale dhammaan faahfaahinta noocyadeeda, qiimayaasha iyo helitaankooda.
Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in terminal-ka aan wali rasmi laga dhigin micnaheedu maahan inaynaan helin wax warbixinno ah oo ku saabsan qaababka iyo tilmaamtiisa Laakiin waxaan u nimid inaan ka hadalno hadda waxay la xiriirtaa kan Kala duwanaansho SE, taas oo ka yaraan lahayd. Dareerkii ugu dambeeyay ee aan tilmaamnay wuxuu la xiriiraa qaar ka mid ah sawirrada xaday ee waxa u muuqda sanduuqa tafaariiqda, iyo waxa ay muujineyso waa muuqaal aad ugu eg iPhone 11 Pro.
Taasi waa sida ay tahay. Waxay u muuqataa taas Huawei wuxuu qaatay naqshadda iPhone 11 Pro si loogu hirgeliyo Nova 6 SE si ficil ahaan loo raad raaco. Tan waxaa loo arkaa, in ka badan wax kasta, naqshadda dambe, oo leh kamarad kamarad la mid ah ta taleefanka Apple, in kasta oo xaqiiqda ay tahay in dareemayaal dheeri ah oo kamarad afaraad ah uu ku yaal qalabkan cusub. Dhanka kale, waxay noo sheegaysaa inay u badan tahay in tayada qaarkood ay ka duwan yihiin kuwa aan ka heli doonno Huawei Nova 6, oo ah nooca dhexe.
Dhinaca hore, taleefanku wuxuu leeyahay shaashad dalool leh oo daloolka la dhigay geeska bidix ee kore. Waxay u badan tahay inay tahay guddi IPS LCD ah, maaddaama sawirku muujinayo in Nova 6 SE uu leeyahay sawir-qaade dhinac-dhajinta ah oo labalaabmaya badhanka awoodda. Marka laga hadlayo qeexitaankiisa farsamo, madal wareega Kirin 810, oo ay weheliso 40-watt oo si dhakhso ah u shaqeeya, waa waxa hoos fadhiya daboolka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei Nova 6 SE waxaa ku dhiirrigelin doona iPhone 11 Pro